TINACloud अन-लाइन सर्किट सिम्युलेटर
TINA + TINACLOUD: अफलाइन + अनलाइन सर्किट डिजाइन र विश्लेषण
TINACloud लोकप्रिय को क्लाउड आधारित बहु भाषा अनलाइन संस्करण हो TINA सफ्टवेयर अहिले तपाईँको ब्राउजरमा कुनै पनि स्थापना बिना र संसारमा कहीं पनि चलिरहेको छ। तपाईं TINA को मूल्य को अंश को लागि TINACloud को सदस्यता ले सकते हो, या यदि तपाईं डाउनलोडयोग्य TINA कार्यक्रम को लागि एक इजाजतपत्र खरीदते हो, हामी TINACloud को एक डाउनलोड बिकाऊ TINA को सबै नयाँ लाइसेन्स संग एक विशेष बंडल प्रस्ताव गर्दै छन् .यो पृष्ठ TINACloud को लागि समर्पित छ। डाउनलोड अफलाइन TINA सफ्टवेयरमा थप जानकारीको लागि, जुन तपाइँ आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् TINA वेबसाइट: www.tina.com.
TINACloud एक शक्तिशाली, औद्योगिक शक्ति, अनलाइन सर्किट सिम्युलेटर उपकरण हो जुन विश्लेषण, एनालॉग, डिजिटल, VHDL, वेरिइलॉग, वेरिलोग ए ए ए एस, एमसीयू र एसएमपीएस, आरएफ, संचार, र optoelectronic सर्किट र परीक्षण सहित मिश्रित इलेक्ट्रनिक सर्किट को डिजाइन गर्न अनुमति दिन्छ। मिश्रित सर्किट वातावरणमा माइक्रोकोन्डरर अनुप्रयोगहरू। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङहरू TINACloud प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ, उच्च प्रदर्शन उपकरण, जबकि शिक्षकोंले प्रशिक्षक वातावरण र दूरी शिक्षाको लागि यसको अनौठो विशेषताहरूको स्वागत गर्नेछ।
आवेदन उदाहरण: अन-लाइन एसएमपी अनुकरण।
त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् तस्विर मेनु, क्षणिक ... र रन बटन थिच्नुहोस्।
TINACloud पीसी, म्याक, पतली ग्राहकहरू सहित धेरै OS र कम्प्युटरहरूमा चलाउँछ, iPads र अन्य ट्याब्लेटहरू - यहाँ पनि थुप्रै स्मार्टफोनहरू, स्मार्ट टिभीहरू र ई-पुस्तक पाठकहरू पनि। तपाईं TINACloud प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कार्यालय, क्लासरूम, घरमा, र, वास्तवमा, जुन विश्वमा कहीं पनि इन्टरनेट पहुँच छ। खुला र वेबबाट चलाउनुहोस्! अब तपाईं TINA डिजाइनहरू साथै आयात आयात गर्न सक्नुहुन्छ Spice .CIR र .LIB फाइलहरू वेबबाट सिधै। हाम्रो सर्किट हेर्नुहोस् सर्किट गैलरी वा हाम्रो साझा सर्किट फोरम जहाँ तपाइँ रोचक सर्किटहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई वेबबाट सीधै चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ वेबमा TINA सर्किट पृष्ठ जहाँ तपाईं सर्किट र पुस्तकालयहरु संग अन्य वेबसाइटहरु को लिङ्कहरु लाई मिलेगा जो तपाईं वेब देखि सीधा खोल सकते हो र फेरि TINACloud अनलाइन संग अनुकरण गर्न सक्छन्।
TINACloud को अधिकांश विशेषताहरु TINA को अफलाइन संस्करण को लागी धेरै यहाँ वर्णन गरिएको छ: https://www.tina.com/। तथापि तथापि TINACloud मा तपाइँ कुनै ब्राउजरमा कुनैपनि समयमा, कुनै पनि स्थापना बिना ब्राउजरमा चलाउन सक्नुहुनेछ।
ट्यूटोरियल भिडियोहरू र हप्ताको सर्किट:
TINACloud अन-लाइन सर्किट सिम्युलेटरको साथ ट्याब्लेटहरूमा सर्किटहरू सिर्जना र विश्लेषण गर्दै
TINACloud सँग एक कैसीसिटिन्स गुणक सर्किटको सिर्जना र अनुकरण
अनलाइन सर्किट अनुकरण दुई OPA569 को समानांतर मा वर्तमान स्रोतहरु
अन-लाइन डिजाइन उपकरण। TINACloud मा TINA अफलाइन संस्करणको डिजाइन शक्तिशाली उपकरण पनि समावेश छ। यसले तपाईंको सर्किटको डिजाइन समीकरणको साथ काम गर्दछ जुन निर्दिष्ट आगतहरू निर्दिष्ट आउटपुट प्रतिक्रियामा परिणाम हुन्छ। उपकरणले तपाईंलाई एक समाधान इञ्जिन प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले विभिन्न परिदृश्यहरूको लागि दोहोरो र सही समाधान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। गणना घटक मानहरू साथी TINA योजनाबद्ध रूपमा स्वचालित रूपमा सेट गरिएको छ र तपाईं अनुकार द्वारा परिणाम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा अर्धचालक र अन्य इलेक्ट्रोनिक्स घटक निर्माताहरु को लागी डिजाइन सर्किट को साथ-साथ डिजाइन प्रक्रिया को लागि पनि धेरै उपयोगी छ।
अन-लाइन शैक्षिक उपकरणहरू। TINACloud विद्यार्थीहरूको ज्ञान परीक्षणको लागि अद्वितीय अन-लाइन उपकरणहरू समावेश गर्दछ, प्रगतिको निरीक्षण र लाइनमा समस्या निवारण प्रविधिहरू परिचय गर्न। तपाईले परीक्षण पानाहरू धेरै छनौट प्रश्नहरू, समस्या समाधान गर्न वा समस्या निवारण गर्न सक्नुहुनेछ, वा विद्यार्थीहरू वा प्रत्येक समूहका लागि एक समूहको लागि प्रत्येक विद्यार्थी वा उपसमूहको लागि साधारण। विद्यार्थीले यी ल्याब वा घरमा यी परीक्षणहरू समाधान गर्न सक्छन् र तपाईं परिणामको निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यो लागि एक अत्यन्त उपयोगी सुविधा हो दूरी शिक्षा.
TINACloud पनि इन्जिनको रूपमा सेवा गर्दछ Infineon डिजाइनर एक इन्टरनेट अनुप्रयोगमा एनालग र डिजिटल सिमुलेशन प्रकार्यताहरू संयोजन गर्ने पहिलो अनलाइन प्रोटोटाइप अनुप्रयोग। केवल एक वेब ब्राउजर को आवश्यकता छ, यो परिभाषित अनुप्रयोग को लागि सही उत्पादन को चयन मा ग्राहकहरु को समर्थन को लागि एक सही मिलान हो। Infineon डिजाइनर एकदम छोटो समयमा काम गर्दछ, र न त स्थापना र नजाउको लाइसेन्स चाहिन्छ। कार्यक्रमले औद्योगिक पावर, लाइटिंग, मोटर नियन्त्रण र मोबाइल / आरएफ फ्रन्टइन्ड डिजाइनको डोमेनमा अनुप्रयोग सर्किटहरू देखाउँछ। यसले 32-बिट XMC1000 औद्योगिक माइक्रोक्रोम्यानर एआरएम कोर्टेक्स-एमएक्सएनएमएम सीरीजको एनालॉग / डिजिटल सह-सिमुलेसनलाई सक्षम बनाउँछ, नि: शुल्क-चार्ज कोड पीडित प्लेटफार्म डीभीई प्रयोग गरेर।
TINACloud सँग पूर्णतया उपयुक्त छ Infineon डिजाइनर, Infineon डिजाइनर मा डिजाइन गरिएको डिजाइन TINACloud मा अपलोड गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रवाह सर्किटमा विस्तार वा सम्मिलित गरेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ। इन्फाइनन डिजाइनरको आवेदन सर्किट पनि TINACloud मा उपलब्ध छन्।
Infineon डिजाइनर उपलब्ध छ https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/ifxdesigner.html.
मूल्य सूची र अर्डर फारम
अर्डर अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्